दशैंमा घर जाँदै हुनुहुन्छ ? भाडा दर थाहा पाउनुहोस् ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाण्डौ । हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको महान चाड दशैँलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक यातायातको अग्रीम टिकट बुकिङ आज (आइतबार) देखि खुलेकाे छ । चाडपर्व मनाउनका निमित्त काठमाडाैंबाट घर फर्किने सर्वसाधारणलाई मध्यनजर गर्दै यातायात व्यावसायी महासंघले यात्रुहरूकाे सुविधा र सुरक्षित यात्राका लागि आजदेखि अग्रीम टिकट बुकिङ शुरू गरेकाे हाे ।
सम्बन्धित टिकट काउन्टरमा पुगेर टिकट लिन सकिन्छ भने अनलाइनमार्फत पनि टिकट बुकिङ गर्न सकिन्छ । अनलाइनमार्फत टिकट लिँदा भाडादर त्यहीँ लेखिएको हुन्छ । काउन्टरमा पनि भाडादर लेखिएको हुन्छ । तर कतिपय गाडीवालाले निर्धारितभन्दा धेरै भाडा लिएको यात्रुको गुनासो सुनिन्छ । कहाँ जाँदा कति भाडा लाग्छ भन्ने जानकारी यात्रुलाई भयो भने ठगिने सम्भावना हुँदैन ।
सरकारले यस वर्ष भाडा बढाउने तयारी गरे पनि तत्काललाई रोकिएको छ । चाडपर्व अगाडि भाडा नबढ्ने सरकार र व्यवसायीले स्पष्ट पारिसकेका छन् । त्यसैले दशैँमा घर जाँदा यसअघिकै भाडादरमा यात्रा गर्न पाइन्छ ।
काठमाडाैंमा काेटेश्वर, चाबहिल, गाैशाला, पुरानाे बसपार्क, नयाँ बसपार्क, सुन्धारा, कलंकी गरी सात ठाँउका काउन्टरबाट टिकट बुकिङ गर्न सकिने महासंघले जनाएकाे छ ।
दशैं र दीपावलीकाे समयमा करिब २५ लाख मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिन्छन् । यस बेला सर्वसाधरणलाई कठिन हुने भएकाले प्रत्येक वर्ष सरकारले अग्रिम टिकट बुकिङकाे व्यवस्था गर्दै आएकाे छ ।